Howlgal ka socda dalka Koonfur Afrika iyo Weerar lagu qaaday qoyska Madaxweyne Zuma – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaHowlgal ka socda dalka Koonfur Afrika iyo Weerar lagu qaaday qoyska Madaxweyne Zuma
Howlgal ka socda dalka Koonfur Afrika iyo Weerar lagu qaaday qoyska Madaxweyne Zuma
Hiiraan Xog, Feb 14, 2018:- Ciidamada Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa bilaabay howlgal ballaaran oo ay ku baacsanayaan xubno ka mid Qoyska Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jocob Zuma.
Howlgalkaan ayaa yimid xilli Saacaddihii loo qabtay in uu xilka kaga dego Jocob Zuma ay ka dhiman yihiin Wax yar.
Ciidamada Booliska ayaa xiray Afar qof oo uu ka mid yahay wiil la dhashay Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika.
Sidoo kale Ciidamada ayaa weeraray Ganacsato lagu tuhmaayo in ay ka qeyb ka yihiin Musuq maasuqii lagu eedeeyay Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika.
Xisbiga haya talada dalka Koonfur Afrika ee ANC ayaa si rasmi ah uga dalbaday madaxweyne Jacob Zuma inuu is casilo.
Haddii Zuma oo 75 sano jir ah uu diido baaqa xisbigiisa, waxaa laga yaabaa in loo qaada codka kalsoonida waxayna u badan tahay inuu wayn doono kursiga.
Madaxwaynaha dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu wajahayaa dacwado la xiriira musuqmaasuq waxa uuna in muddo ah ku adkaysanayay mowqifkiisa ah in uusan xilka ka dagin.